यति होचो मेघराजले बिहे गरे, यति अग्ली श्रीमती ! यस्तो छोरा जन्मिए । १५ दिनदेखि खान नपाएर ६ महिने छोराको बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस) – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Video/यति होचो मेघराजले बिहे गरे, यति अग्ली श्रीमती ! यस्तो छोरा जन्मिए । १५ दिनदेखि खान नपाएर ६ महिने छोराको बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस)
यति होचो मेघराजले बिहे गरे, यति अग्ली श्रीमती ! यस्तो छोरा जन्मिए । १५ दिनदेखि खान नपाएर ६ महिने छोराको बिचल्ली (भिडियो हेर्नुस)
होचा कलाकार मेघराज खड्का यतिबेला समस्यामा परेका छन् । लकडाउनका कारण घरमा पकाउनका लागि चामल, दालकै अभाव भएपछि उनलाई सहयोग लिएर शिशिर भण्डारी उनी बस्ने कोठामा पुगे । शिशिरले मेघलाई सहयोग गर्दा आफ्ना अघिल्ला दिनहरुको याद आएको बताए ।
शिशिर भण्डारी लेख्दछन्,- म यति होचो, अनुहार पनि नपरेको । उनी राम्री र अग्ली । भने जस्तै केटा पाउँथिन् उनले । तर माया बस्यो, उनले मेरो मन हेरिन्, मैले पनि आफुसँग भएको कला देखाएर तिमीलाई पाल्छु भनेर बिहे गरें, सन्तान भयो । अहिले, सबै काम ठप्प हुँदा श्रीमतीलाई खुवाउने त के, ६ महिने छोरालाई दुध र औषधी खुवाउने पैसा पनि छैन मसँग, दाई ! यति भन्दै होचा कलाकार मेघराज खड्का भक्कानिए ।
पानी परेपछिको हिलो र अप्ठेरो बाटो हुँदै सहयोग लिएर मेघको घरमा पुग्दा, मैले फेरी आफ्नो बिगत सम्झिएँ । साँच्चै, कुनै दिन टेम्पु चढ्ने भाडा पनि हुँदैनथ्यो, खल्तीमा । अरु त परको कुरा, यहाँ धेरै पिडामा छन् अनि मेघ जस्तै सँघर्षरत कलाकारको पिडा पनि कम छैन । मेघ भाईको परिवारलाई खाद्यान्नको सानो सहयोगपछि खुशी थिएँ, १५ दिनपछि त्यो कोठामा चुल्हो बल्दैथ्यो, अनि ६ महिने बाबुको पेट भरिदै थियो ।
देश तथा बिदेशबाट नेपालमा रहेका अन्य दुखीहरुलाई सहयोग गर्न पनि शिशिरले अपिल गरेका छन् । त्यसका लागि उनलाई ९८११००६९२९ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
भर्खरै आयो दुखद् खबर ! फेरि थपिए3को’रोना सं’क्रमित
४ हजारको नि’हुमा घरबेटिले गरे ह’त्या, दाउरो प्र’हार गर्दै देखेका प्रत्यक्षदर्शी मिडियामा(भिडियो)